Umndeni ubhekene ngeziqu zamehlo ngelokungcwaba owawina iLotto | News24
Umndeni ubhekene ngeziqu zamehlo ngelokungcwaba owawina iLotto
eMnambithi – Kumiswe umngcwabo kaLucky Dlamini waseNgwelezane owashona engozini yemoto ngesonto eledlule.
UDlamini bekumele angcwatshwelwe emzini wakhe asanda kuwakha eMnambithi ngoMgqibelo, kodwa lokhu akwenzekanga njengoba kugasele umndeni wakubokayise ufuna angcwatshelwe eNkandla.
UDlamini washona engozini yemoto ngesonto eledlule ngesikhathi imoto yakhe yohlobo lwe-Mercedes ishayisana neveni ehamba nabangani bakhe.
OLUNYE UDABA:Ukhala uyazithulisa owawina iLotto, intombi ‘yamchutha’ yonke imali
UBuddha njengoba ayebizwa ngabangani bakhe wawina iLotto ngo-2014, wakhela izingane zakubo umuzi eMnambithi, wenzela umama wakhe ongasekho kanye noyise umsebenzi wesintu waphinde wanikela nakumalumekazi wakhe waseNgwelezane owamkhulisa.
Kuthiwa lesi sichomane sanyamalala emsebenzini isonto lonke ngesikhathi siwine iLotto saqhamuka nonyanyavu lwemoto i-Range Rover Evoque ebhalwe ukuthi “Le Good Life”, okuhle ngaye wukuthi wabuyela kumqashi wakhe wayonikela ngemadlana embonga ngakho konke amenzela kona.